Guulaha Md Farmaajo iyo Miisaankii Shalay! - Ceelhuur Online
Home > Arimaha Bulshada > Guulaha Md Farmaajo iyo Miisaankii Shalay!
Guulaha Md Farmaajo iyo Miisaankii Shalay!
January 23, 2019 January 23, 2019 admin682
Waxaa guulo loo mashxaradeeyo noqday in Taabit, Jawaari, wasiiro, guddoomiyahaasha heerarka maxkamadaha, saraakiisha ciidanka iyo nabad sugidda xilalka laga qaado. Waxaa loo dabbaal dagay weerarkii sharci darrada ahaa ee lagu qaaday Cabdiraxmaan Cabdishaluur, afduubkii Roobow, kala diristii guddiga maaliyadda ee baarlamaanka, cadaadintii Shariif Xasan iyo natiijadii doorashadii Koonfur Galbeed, ceyrintii Haysom iyo soo dhoweynta in isla qof ajnabi ah bankiga dhexe sidii loogu dhiibi lahaa shuruucda dalka loo beddelo.
Is qab qabsiga siyaasiyiinta iyo xil ka xayuubinta muddaba way taagneyd oo madaxweyne Farmaajo lama billaaban. Madaxweyne Cabdiqaasim waxay is qabteen guddoomiyihii Baarlamaanka Cabdalla Deerow AUN wuxuuna ku beddelay Mustaf Mukhtaar Guudow, waxay is qabteen RW Galeyr, wuxuu ku beddelay Xasan Abshir, oo markii ay is qabteen uu ku sii beddelay Maxamed Cabdi Yuusuf, wuxuu dhowr jeer magacaabay guddoomiyayaal gobolka Banaadir.
1- Qofka marka uu aaminsan yahay in uu awood leeyahay waxaa laga filanayaa in uu u turo inta ka tabar daran, hadduu awood isticmaalana wuu ku ceeboobaa. Qofka aaminsan in uu aad u tabar daran yahay, jug walba oo uu u geysto qofka ka soo horjeeda wuu u dabbaal degaa. Waa sababta Falastiiniyiinta marka ay qaraxyo geystaan ay Carabtu ugu dabbaal degaan, marka ay Israa’iil wax duqeysana adduunka u cambaareeyo. Siyaasiyiinta Villa Somalia joogta ayaa markaan aaminsan in ay aad u tabar darnaayeen, oo waxyeelo walba ay geystaan ugu fasirta guul.
2-Shacabkii is qabqabsiga necbaa, qaarkood waxaa maan rogay warbaahin lacag badan la geliyay iyo shaqsiyaad guul darada u tarjuma guul la gaaray.
Xil xayuubin, xoog iyo sharci darro mar walba waa u guul darro iyo curyaamin inta isku il ku eegta shalay iyo maanta.
Marka laga reebo Md. Cabdullaahi Yuusuf oo aanan waraysan, madaxdii kale waan waraystay. In ay madax xilka ka qaadaan uma heysan guul, waxay u heystaan wax ay duruuftu ku kaliftay, oo ay ka fursan waayeen, waxyeelana lahayd.
Banaanbax Ka dhacay Dhuusamareeb